जाडोमा मुटु कसरी स्वस्थ राख्ने? (भिडिओ) :: डा. अनिल भट्टराई :: Setopati
जाडोमा मुटु कसरी स्वस्थ राख्ने? (भिडिओ)
‘कोभिड-१९ भएकाले एक पटक मुटुको परीक्षण गर्न सुझाव दिन्छौं।’
मुटु रोगीले जाडोमा बिहानै चिसोमा हिँड्न हुँदैन। शारीरिक गतिविधि गर्दा घाम लागेपछि मात्र गर्नुपर्छ। जाडोको समयमा रक्तचाप बढ्ने, पहिल्यै हृदयघात भएका र मुटुको समस्या भएकाले चिसोमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
चिसोको समयमा घाम कम लाग्ने र दिन पनि छोटो भएकोले भिटामिन डीको त्यसै पनि कमी हुन्छ। भिटामिन डीको मुटुसँग सिधै सम्बन्ध हुन्छ। भिटामीन डीले मुटुको मांसपेशीलाई बलियो बनाउने, रक्तनलीलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको हुन्छ।
त्यसैले दिउँसो घाम ताप्न हामी सल्लाहसमेत दिन्छौं। विशेष गरेर भिटामीन डीको कमी छकि छैन भनेर परीक्षण गरि त्यहीँ अनुसारको औषधिसमेत लिनुपर्ने हुनसक्छ।
जाडोको कारण शारीरिक गतिविधि कम हुने भएकोले शरीरमा कोलस्ट्रोल र सुगरको मात्रा बढ्नसक्छ। त्यसैले रगत परीक्षण यसबारे जानकारी लिनु राम्रो हुन्छ।
धेरै क्यालोरी भएको खाना, कार्बोहाड्रेट भएको खाना कम खाने सल्लाह दिन्छौं। भात, आलु र गुलियो जन्य चिजहरू थोरै खान सुझाव दिन्छौं।
मुटुको समस्या नभएकाले पनि रोग नलागोस् भन्न नियमित आफ्नो शारीरिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यो सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण काम हो। बाहिर निस्किन अफ्ठ्यारो भएमा घरमै जे सम्भव छ त्यो गर्नुपर्छ। सकेसम्म आफ्नो तौल बढ्न दिनु हुँदैन।
विशेष गरेर जाडोमा मासुजन्य, चिल्लोजन्य खाना धेरै खाइन्छ र शारीरिक व्यायाम झनै कम हुन्छ त्यसैले धेरै मान्छेको तौल बढ्छ।
कोरोना संक्रमण भइसकेकाले एकपटक मुटुको परीक्षण गर्नु राम्रो हो। कोभिड लागिसकेका व्यक्तिमा मुटुको चाल गडबड हुने देखिएको छ। कोभिड भएको बेलामा रक्त नलीमा एक किसिमको रगत जमेर थ्रोम्बोसिस भएर अटो थ्रोम्बोलाइसिस भएका केस धेरै छन्। त्यो बेलामा एक किसिमको हृदयघात जस्तो देखियो। तर पछि एन्जियोग्राम गरेर हेर्दा रक्तनली सफा देखियो। कतिपय बिरामीमा त्यस्तो देखिएको छ। कोभिडले भुटुलाई असर गरेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन एक पटक मुटुको परीक्षण गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ।
कोभिडबाट मुटुको मांसपेशी कमजोर हुने र रगत जम्ने प्रक्रिया उच्च हुने भएकोले मुटुको परीक्षण गर्न भनिएको हो।
कोभिड भएकालाई मुटुको रोग भएको धेरै 'इभिडेन्स' हरू छन्। त्यसैले मुटुको परीक्षण गरेको राम्रो हो।
जाडोमा मुटु रोगीले कस्तो सतर्कता अपनाउने, मुटु स्वस्थ्य राख्न के गर्ने, कोभिड-१९को संक्रमण भएकाले मुटुको परीक्षण गर्न किन जरूरी छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर टिचिङ अस्पताल, महाराजगञ्जका सह-प्राध्यापक एवम् वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. अनिल भट्टराईसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २४, २०७८, ०३:५६:००